Kudyara Kugadzira Vagadziri & Vatengesi | China Kudhiza Deshedding Fekitori
Pet Undercoat Rake Dematting Chishandiso
Ichi chipfuva chepasi pecheat rake dematting chishandiso ibhurashi repamberi, rinodzora dandruff, kudurura, bvudzi rakakanganisika uye njodzi kune hutano hwechipfuwo bvudzi.Inogona kukwiza zvinyoro-nyoro ganda sezvo iwe uchibvisa zvakachengeteka mateti nejasi.
Chipfuwo chepasi pejasi rake rekudzora chishandiso chinobvisa bvudzi rakawandisa, rakateyiwa ganda rakafa, uye dhanzi kubva kumhuka dzinovaraidza zvinogona kubatsira kudzikamisa kurwara kwemwaka nekuhotsira kwevaridzi vane zvipfuyo vane hutano.
Ichi chipfuva chepasi pejasi rake rekudzora chishandiso chisina-kutsemuka, nyore kubata, mubato wedu wekushongedza hauna kuomesa pane ganda rechipfuwo uye majasi uye haizokanganisa ruoko rwako kana ruoko.
Kuratidzira Brush Kune Imbwa
1.Mashizha akachinjika eiyi inodonhedza bhurashi kune imbwa zvinobudirira kugadzirisa machira akasindimara, tangles, uye burs pasina kudhonza. inosiya bhachi rako repamusoro rakatsetseka uye risina kukuvara, uye rinodzora kuteura kusvika 90%.
2.Chishandiso chakanakisa chekusunungura nzvimbo dzakaomarara dzehuswa, senge kuseri kwenzeve uye muhapwa.
3.This bratting brush yeimbwa ine anti-slip, nyore-kubata mubato iyo inovimbisa kuchengetedzeka uye kugadzikana kana iwe uchishongedza chipfuwo chako.